Instagram 107.0.0.27.121 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
Android Apps များ
စတိုးမွ ေဒါင္းလုပ္မ်ား 5k - 25k
ဗားရွင္း 107.0.0.27.121 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဤအက္ပ္ကို သင့္ဒက္စေတာ့ပ္သို႔ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
QR ကုဒ္ကို စကန္ဖတ္ၿပီး ဤအက္ပ္အား သင့္ Android စက္ပစၥည္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္းပါ
Application မ်ား လူမႈေရး Instagram
Instagram ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
— Instagram from Facebook
Connect with friends, share what you’re up to, or see what's new from others all over the world. Explore our community where you can feel free to be yourself and share everything from your daily moments to life's highlights.
* Add photos and videos to your story that disappear after 24 hours, and bring them to life with fun creative tools.
* Message your friends in Direct. Start fun conversations about what you see on Feed and Stories.
* Post photos and videos to your feed that you want to show on your profile.
* Check out IGTV for longer videos from your favorite creators.
* Get inspired by photos and videos from new accounts in Explore.
* Discover brands and small businesses, and shop products that are relevant to your personal style.
- Facebook ကိုထံမှ Instagram ကို
, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါသငျသညျအထိပါပဲအဘယ်အရာကို share, ဒါမှမဟုတ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အခြားသူများထံမှအသစ်သောဘာကိုကြည့်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်အခမဲ့ခံစားရနှင့်သင့်နေ့စဉ်အချိန်လေးကနေဘဝပျေါလှငျမှအရာအားလုံးကိုဝေမျှနိုင်ပါတယ်ရှိရာကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း Explore ။
* 24 နာရီအကြာတွင်ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းကိုသင်၏ပုံပြင်မှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Add နှင့်ပျော်စရာဖန်တီးမှု tools များနှင့်အတူဘဝထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်။
* တိုက်ရိုက်အတွက်ကို Message သင်၏မိတ်ဆွေများ။ သငျသညျ Feed နှင့်ပုံပြင်များအပေါ်မြင်သောအရာကိုအကြောင်းကိုပျော်စရာစကားစမြည်စတင်ပါ။
သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ပြသချင်သောကြောင့်သင့်ရဲ့ feed ကိုမှ * Post ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ။
* သင်အကြိုက်ဆုံးဖန်တီးသူကနေပိုရှည်ဗီဒီယိုများအတွက် IGTV ထွက်ကိုစစ်ဆေးပါ။
* Explore အသစ်အကောင့်များမှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားဖြင့်မှုတ်သွင်း Get ။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစတိုင်မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်း * Discover အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆိုင်ထုတ်ကုန်။
Instagram အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Instagram အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Instagram အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Instagram အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 0
လိုင္စင္ လိုအပ္သည္ 0
app အတု 0
vitonline စတိုး 27.94k 4.05M
Instagram ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ လူမႈေရး အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Instagram အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 107.0.0.27.121
အသုံးပြုရန် ကိုက်ညီမှု Android 6.0+ (Marshmallow)
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://instagram.com/legal/privacy/
File Size: 37.18MB
Release date: 2019-08-20 19:35:53
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော စီပီယူ: arm64-v8a
လက်မှတ် SHA1: C5:6F:B7:D5:91:BA:67:04:DF:04:7F:D9:8F:53:53:72:FE:A0:02:11
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Kevin Systrom
အဖွဲ့အစည်း (O): Instagram Inc
နယ်မြေ (L): San Francisco
Instagram APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ